Date My Pet » Inona no fitiavana Afaka hiaro anao amin'ny fahoriana?
Ny traikefa azo avy amin'ny lavo amin'ny fitiavana no zavatra rehetra dia tokony hanana, fara fahakeliny, indray mandeha tao amin'ny / fiainany. Ny zava-tsoa dia ny hoe misy ny olona vitsy izay tena tsy ampy mba tombontsoa manana ny traikefa.
Raha ny dia ny maha-pihetseham-po amin'ny fitiavana no mahavelona, Misy lafin-javatra hafa maro izay mahatonga ny fiainana manana fitiavana tena zava-dehibe. Ny fitiavana no tena hiaro anao amin'ny fahoriana; mamaky eo mba hahafantatra ny fomba.
Dia Firy taona ny miadana
Inona no mety ho lehibe kokoa noho ny mijery fahoriana taloha? Ny fitiavana dia afaka hisakana anao tsy voan'ny fahanterana aloha loatra. No fantatrao momba oxytocin (ny romantics manondro azy ho ny fitiavana hormonina)? Tia manao vokatry mitombo eo anivon'ny olombelona oxytocin amin'ny vatana. Oxytocin mahatonga famokarana ny DHEA, hormone fantatra amin'ny anti-fahanterana soa.
Tsy hitanao ny ny hoditrao glows aorian'ny firaisana ara-nofo? Tsy Hitanao ny mavitrika mahatsapa ny maraina rehefa avy? Ireo rehetra ireo dia noho ny anti-fahanterana tombontsoa azo avy amin'ny DHEA.
Ny fitiavana dia mampianatra anao mba ho sahy
Zero na fahatokiana ambany ihany no hitarika ho amin'ny zavatra iray, olana ny fiainana. Mety hisakana anao tsy hahazo asa tsara; mety hanakana anao tsy manao ny tenanao nandre amin'ny fotoana ilàna, ary farany dia manery anao hijanona kely fikambanana noho izay mendrika ny ho.
Ny iray amin'ireo lafiny tsara indrindra vokatry ny fitiavana dia tosika amin'ny fahatokiana. Rehefa mizara ny tantaram-pitiavana fifandraisana amin'ny olona matetika fa ny olona manao ianao toy ny Superman / superwoman. Eny, Mety hanakiana ny mpiara-miasa aminao ny zavatra sasany, fa ianao ankapobeny mitoetra foana ny tsara indrindra ho azy / azy. Dia ho azy izany instate-tena mino anao sy hahatonga anao hatoky kokoa ny olona; ary rehefa matoky ny antsasaky ny ao olana dia voavaha.
Ny fitiavana dia afaka hiaro anao amin'ny zava-mahadomelina
Tsy afaka ny tsy ho tsara kokoa na fanafody fepetra fisorohana ny fidorohana zava-mahadomelina noho ny fitiavana. Ny olona any Etazonia dia tena sahiran-tsaina amin'ny tahan'ny fitomboan'ny fidorohana zava-mahadomelina; ny fitiavana dia mety ho vahaolana tsara indrindra ho an'io olana.
Fahazaran-dratsy toy ny fandraisana zavatra voarara sy ny fisotroana tafahoatra matetika ny ketraka byproducts. Ny fanambadiana sambatra heniky ny fitiavana dia afaka foana ketraka amin'ny helo-drano ary dia afaka mampihena ny vintana iray latsaka ny zava-mahadomelina sy ny toaka be.
Ny fitiavana misakana STDs
Rehefa tia olona iray ianao, Tsy ianao ihany no miandry azy / azy ny tsy hivadika ianao, fa mazàna tsy hanao zavatra scratchy ao ambadiky ny indray izany olona izany. Mba mametraka azy kokoa tsy nisy olakolaka, olona amin'ny fitiavana tsy nisalasala mametraka ezaka fanampiny mba hivadika ary izany no voalohany indrindra satria tsy te hampalahelo ny olona izy ireo tia. Fa, fa ahoana no afaka ampifandraisina amin'ny STD fisorohana?
Misy rohy matanjaka tsara tarehy.
Ny olona noho ny amin'ny fitiavana ny tsy fivadihana tryst amin'ny tsy tena mihaja izany matetika no manao firaisana ara-nofo manana mpiara-miasa maro ary izany indray kosa dia mampihena ny vintana ny fampitomboana ny STDs. Eny, fa tsotra toy izany.
Ireo no sasany fitiavana ny olana dia afaka miaro anao amin'ny. Raha te-hahafantatra bebe kokoa ny fitiavana ny zavatra atao, fotsiny raiki-pitia.